Mhando ina dzeWheelchair Cushions - Upholstery yeWheelchair
Mawiricheya zvishandiso zvakakosha zvevanhu vari remara kana kuti kufamba matambudziko. Kusarudza iyo chaiyo wiricheya inogona kuve inonyengera nekuti iwe unofanirwa kufunga nezvenzvimbo yauchange uri kushandisa icho, uremu hwemuviri wako uye chakanangana kuremara. Nezvikonzero izvi, zvakagadziriswa Mawiricheya zviri kuwedzera kufarirwa nhasi. Saka iwe wasarudza iyo wiricheya iyo inokodzera zvaunoda iwe zvakanakisa, ikozvino unogona kutanga kutarisa kune zvishongedzo semakusheni. Izvi zvinodawo kunyatsofungisisa. Kwete chete iyo inoda kuve yakasununguka, zvakare inofanirwa kuita ekurapa mashandiro. Mushoni unofanirwa kutsigira musana nemazvo, uye nhungamiro yakapfava ndeyekusarudza imwechete yeminwe mitatu gobvu. Kune mana makuru marudzi e wiricheya pamakusheni - furo, gel, mhepo kutenderera uye urethane zinga.
furo wiricheya Makuseni
Furo rinozivikanwa nekuti rakasununguka uye rinopa rutsigiro rwakakodzera. Iko kusakosha kwemafuro efuro e Mawiricheya ndeyekuti vanobuda muchimiro nenguva uye vanoneta nekukurumidza. Nekuda kweizvi, ivo havana kukurudzirwa kwekushandisa kwakakura kwenguva refu.
Gel wiricheya Makuseni
Izvi zvinogadzirwa nekuwedzera homwe yegel pamusoro pechitsiko chefuro. Mushoni wacho unorema uye unowedzera huremu ku wiricheya. Dzimwe nguva vanogona kutyora uye vanoguma nekudonha. Iko kushandiswa kukuru kweiyo gel pamakusheni kupa rutsigiro kumhasuru idzo dzave kushushikana.
Kufambisa Kwemhepo wiricheya Makuseni
Mhepo ndiyo chete rutsigiro mumhando idzi dzemakusheni. Izvo hazvina kugadzikana semamwe makushingi uye hazvikurudzirwe kune vashandisi vanowanzo famba-famba zvakanyanya muchigaro chavo. Kudonha zvakare mukana mune aya makushingi.
Urethane Honeycomb wiricheya Makuseni
Rudzi urwu rwekusheni runogovera huremu hwemuviri chaizvo uye zvakare vakasununguka. Yakawedzera kuyerera kwemhepo nekuda kwayo yakasarudzika nyuchi pateni. Izvo zvakare zvakanaka pakubata zvinotyisa uye zvakareruka kwazvo. Hazvishamise kuti izvi wiricheya makushiro ndiwo anozivikanwa kwazvo pamusika nhasi. The wiricheya pamutsago iwe wekupedzisira sarudza zvinoenderana nezvako zvaunoda. Sarudza imwe iri padiki padiki uye inosangana nezvinodiwa pakurapa. Bvunza chiremba wako kana iwe usina chokwadi kuti ndeupi mushini wekusarudza. Vako vemunharaunda zvekurapa zvitoro vashandi vane hupfumi hwezivo hunogona kukubatsira iwe kuita yako yekupedzisira sarudzo.
Nyaradzo yeWiricheya Makushoni Kudzivirira Pressure Maronda
Uchishandisa Wiricheya Cushion Kune Yakanaka Ride
Kupfeka muWheelchair Cushions